A Twitter oghom oghom ike na-adụ anyị ọdụ ịgbanwe okwuntughe | Akụkọ akụrụngwa
O yiri ka ọ dịghị onye nwere nsogbu pụọ na nsogbu metụtara nchebe paswọọdụ na nke a, netwọk mmekọrịta Twitter na-ajụ ndị ọrụ ya niile ịgbanwe paswọọdụ nke akaụntụ ha n'ihi nnukwu nsogbu nchekwa.
Nyere nke a anyị nwere ike naanị nabata ọdịda ma gbaa ọsọ ịgbanwe paswọọdụ nke akaụntụ anyị tupu akahụa. Na nkwupụta nke Twitter zigara ndị ahịa niile, ekwuru ya na edozila ọdịda ahụ, mana n'ọnọdụ ọ bụla ọ dị mkpa ịgbanwe paswọọdụ anyị.
Nke a bụ email mara na Twitter na-ezipụ ndị ọrụ gị niile:
Mgbe ị debere paswọọdụ maka akaụntụ Twitter gị, anyị na-eji teknụzụ zoo ya ka onye ọ bụla ghara ịhụ ya. Na nso nso a, anyị chọpụtara ahụhụ na-edobe okwuntughe na-ezighi ezo na ndekọ ndekọ dị n'ime. Anyị emeziela njehie ahụ na nyocha anyị gosipụtara na ọ nweghị onye mebiri iwu ma ọ bụ jiri ozi ahụ mee ihe na-adịghị mma.
Maka nchedo ka ukwuu, anyị na-akwado ka ị gbanwee paswọọdụ gị na ọrụ niile ebe ị jiri ya. Can nwere ike ịgbanwe paswọọdụ Twitter gị oge ọ bụla site na ịga na ibe Twitter Mbido nke okwuntughe.
Anyị na-ezo okwuntughe site na usoro hashing na-eji ọrụ a maara dị ka bcrypt, na-esite na nọmba ọnụọgụ na mkpụrụedemede na-edochi anya paswọọdụ ziri ezi na akara Twitter. Nke a na-enye anyị ohere iji gosipụta nzere akaụntụ gị na-enweghị ekpughe paswọọdụ gị. Nke a bụ ọkwa ụlọ ọrụ.
N'ihi ahụhụ, a na-edepụta okwuntughe na ndekọ dị n'ime tupu usoro hashing zuru ezu. Anyị chọtara ahụhụ a n’onwe anyị, wepu okwuntughe, wee bido mejuputa atumatu iji gbochie ahụhụ a ime ọzọ. Ndụmọdụ Akaụntụ Nche Cheta na ọ bụ ezie na enweghị ihe kpatara ị ga-eji kwenye na ozi okwuntughe sitere na sistemụ Twitter ma ọ bụ na mmadụ jiri ozi ahụ mee ihe n'ụzọ na-ezighi ezi, enwere ụfọdụ usoro ị ga - eme iji nyere anyị aka ịchekwa akaụntụ gị:
Jiri njikwa okwuntughe iji hụ na ị na-eji okwuntughe siri ike na nke pụrụ iche maka ọrụ niile.
Gbanwee okwuntughe gi na Twitter na oru ndi ozo ebe inwere ike iji ya.
Jiri okwuntughe siri ike nke ị na-agaghị eji ọzọ na ọrụ ndị ọzọ. Kwado ndị nbanye nkwenye, makwaara dị ka ihe nyocha abụọ. Nke a bụ usoro kachasị mma ị ga - eme iji bulie nchekwa nke akaụntụ gị.
O wutere anyị na ihe a mere. Anyị ji ntụkwasị obi ị tụkwasịrị obi anyị kpọrọ ihe, ya mere, anyị na-agba mbọ inweta ya kwa ụbọchị.
Anaghị m echeta ọdịda dị ka nke a na ntanetị mmekọrịta Twitter ruo ogologo oge, yabụ na anyị agaghị ewe iwe maka ya, mana ọ na-aghọwanye ihe dị mkpa idebe data nzuzo nke ndị ọrụ na nke a ọ ga-adị mkpa iji gbanwee paswọọdụ a ma ọ bụrụ na anyị achọghị inwe nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ihe nchedo Twitter na-adụ anyị ọdụ ka anyị gbanwee okwuntughe
N'ihi thorium, otu ndị na-eme nchọpụta jisiri ike mepụta nche kacha mma n'ụwa